Fa maninona no lazain'izy ireo fa Jesosy Zanak'i Davida? ▷ ➡️ Mahita an-tserasera ▷ ➡️
Fa maninona no lazain'izy ireo fa Jesosy Zanak'i Davida?
Fa maninona no lazain'izy ireo fa Jesosy Zanak'i Davida? Ny fanontaniana apetraky ny Kristiana maro dia ny antony nahatongavan'i Jesosy, teraka efa ho 1000 taona taorian'ny nahatongavan'i David, ho zanany. Ho an'ny olona maro dia zavatra sarotra takarina izany, ny tena antony dia hita ao anaty Baiboly. Tohizo ny famakiana eto ambany hahazoana ny valiny tadiavinao.
1 Fa maninona no lazain'izy ireo fa Jesosy Zanak'i Davida?
2 Hatraiza ny maha-zava-dehibe ny anaram-boninahitra "Zanak'i Davida"?
3 Zanaka sa tompon'i Davida?
Fa maninona no lazain'izy ireo fa Jesosy Zanak'i Davida
Jesosy dia nantsoina hoe zanakalahin'i David satria izy Taranak'i Davida ary mpandova ny teny fikasan'i Davida. Jesosy dia zanak'Andriamanitra, nefa tonga olona. Tamin'ny naha-lehilahy azy dia tamingan'i Davida Mpanjaka izy.
"Ny amin'ny Zanany, dia Jesosy Kristy Tompontsika, izay avy tamin'ny razamben'i Davida araka ny nofo, izay nambara ho Zanak'Andriamanitra tamin'ny hery, araka ny Fanahin'ny fahamasinana, tamin'ny nitsanganany tamin'ny maty."
Romana 1: 3-4
David dia velona tokony ho arivo taona talohan'i Jesosy. Rehefa niantso an'i Jesosy hoe "Zanak'i Davida" ny olona dia "tamin'ny heviny hoe"taranaky«. Josefa, rain'i Jesosy, dia nantsoina koa hoe zanakalahin'i David, mitovy hevitra aminy.
"Ary raha mbola nieritreritra izany aho, dia, indro, nisy anjelin'ny Tompo niseho taminy tamin'ny nofy ka nanao taminy hoe: Ry Josefa, zanak'i Davida, aza matahotra handray an'i Maria vadinao; fa izay nateraka dia avy tamin'ny Fanahy Masina. . "
Matio 1: 20
Noho izany, mba hahatakarana an'ity hevitra ity dia tsy maintsy takatsika fa ilay teny "zanakalahin'i", nanana dikany betsaka noho ilay ankehitriny. Ny tiako holazaina koa dia azo heverina ho "taranaky ny."
Fony teto an-tany dia noheverina ho zanakalahin'i Josefa i Jesosy. Koa satria i Josefa dia razamben'ny mpanjaka David, dia nanan-jò ho raisina ho taranak'i Davida koa i Jesosy.
Hatraiza ny maha-zava-dehibe ny anaram-boninahitra "Zanak'i Davida"?
Tena zava-dehibe ve ny titre Zanak'i David
Ny Zanakalahin'i David no ilay Mesia, ilay Mpamonjy nandrasan'ny Jiosy. Araka ny fampanantenan'Andriamanitra nandritra ny Testamenta taloha dia fantatry ny Jiosy fa ny Mpamonjy izao tontolo izao dia:
Jiosy: Andriamanitra ianao nampanantena an'i Abrahama, razamben'ny jiosy rehetra, izay tamin'ny razambeny hotahina avokoa ny firenena rehetra ambonin'ny tany; Ity fampanantenana ity dia nampitaina tamin'i Isaka zanany sy i Jakôba zafikeliny:
«Ary hataoko firenena lehibe ianao ka hitahy anao sy hahalehibe ny anaranao, ary ho fitahiana ianao. Hotahiko izay mitso-drano anao, ary hanozona izay manozona anao; ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany » (Genesisy 12: 2-3).
Avy amin'ny fokon'i Joda: Naminany izany i Jakôba ny firenen'i Joda no hitondra amin'ny firenena hafa rehetra amin'ny Isiraely:
«Ny tehim-panjakan'i Jodà tsy hesorina, na ny mpanome lalàna eo anelanelan'ny tongony mandra-pahatongan'i Silo; Ary hivory eo aminy ny firenena »((Genesisy 49:10).
Avy amin'ny fianakavian'i David: Nampanantena an'i Davida Andriamanitra fa hanjaka mandrakizay ny taranany.
«Nanao fanekena tamin'ilay voafidiko aho; nianiana tamin'i Davida mpanompoko aho hoe: Hotanterahiko mandrakizay ny taranakao ary haoriko amin'ny taranaka fara mandimby ny seza fiandriananao. Selah»(Salamo 89: 3-4).
Amin'ny maha-avy mivantana an'i David, amin'ny lafiny olombelona, Jesosy dia nahafeno ny fepetra rehetra takiana mba ho ilay Mesia. Ny fanondroana azy ho Zanak'i Davida dia zava-dehibe tamin'ny fanaporofoana fa i Jesosy no mpandova ireo fampanantenana ireo, izay nandrasan'ny Mpamonjy rehetra.
Rehefa niantso an'i Jesosy hoe zanak'i Davida ny olona dia nanaiky fa izy no Mpamonjy. Niaiky ny finoany an'i Jesosy izy ireo.
"Ary talanjona ny vahoaka rehetra ka nanao hoe: Zanak'i Davida va ity?"
Matio 12: 23
Zanaka sa tompon'i Davida?
Inona moa i Jesosy: zanakalahin'i Davida na tompony
Jesosy dia naka fanahy ny Fariseo, nanontany ny amin'ny fomba mety hahatonga ny Mpamonjy ho zanakalahin'i David ary koa Tompony miaraka amin'izany. Ny faminaniana dia nilaza fa ho avy amin'ny razamben'i Davida izy, fa i Davida koa naminany fa ny Mesia no ho tompony. Ilay zanaka lahy dia tsy nanana fahefana tamin'ny rainy, koa ahoana no ho mpanompo ny zanany?
«Ary raha teo ny Fariseo, dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe: Ahoana ny hevitrareo ny Kristy? Iza no rainy ?.
Hoy izy ireo taminy: Avy amin'i David.
Ary hoy izy taminy: Ahoana ary no ankanesan'ny Fanahy Masina an'i Davida hoe: Tompoko?
Hoy ny Tompo tamin'ny Tompoko:
Mipetraha eo ankavanako
Mandra-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao va?
Raha toa ka antsoin'i Davida hoe Tompo izy, manao ahoana ny zanany lahy?
Matio 22: 41-45
Nametraka an'io fanontaniana io Jesosy satria nihevitra ny Fariseo fa manana ny marina izy ireo, saingy tsy nanaiky izy ireo fa izy no Mpamonjy. Nasehon'i Jesosy fa tsy fantatr'izy ireo ny zava-drehetra. Ny valin'ny ankamantatra dia izay Jesosy dia avy amin'i David ihany tamin'ny fomban'olombelona. Jesosy koa dia Andriamanitra, koa efa ela be talohan'ny nahaterahan'i Davida no lehibe noho izy.
Izany no izy! Manantena izahay fa ity lahatsoratra ity dia nanampy anao hahatakatra ny antony maninona no lazain'izy ireo fa Jesosy zanak'i David. Raha te hianatra ianao izao ny fomba hampitomboana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, asehonay anao amin'ny dingana 5.
Nahoana i Jesosy no nanozona ny aviavy?
Ahoana ny fomba hampitomboana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra amin'ny dingana 5